काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पर्क विहिन रहेको तार एयरको टुविन्अटर ‘नाइन एनएइटी’ जहाजको खोजी कार्यमा मौसम बाधक बनेको जनाएको छ । प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै प्रतिकुल मौसमक...
rajdhanidaily.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
भै रहवा । शनिबार राति र आइतबार बिहान केहीबेर परेको पानीले भैरहवा जलमग्न भएकोे छ । वर्षाले मुख्य बजार बैंकरोड, मिलनचोक, सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने देबकोटा चोक लगायतका क्षेत्र जलमग्न भएका छन्...
हराएकाे विमान लेते क्षेत्रमा २ पटक घुमेको थियो
पोखरा । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरकाे जहाज सवा २ घण्टादेखि सम्पर्कविहीन नै छ । म्याग्दी कटेर उकालो लागेपछि जहाज बेपत्ता भएको बताइएको छ । मुस्ताङ थासाङ क्षेत्रका स्थानीयले उक्त जहाज त्यह...
हराएकाे तारा एअरकाे जहाजमा को को थिए ? (सूचीसहित)
पोखरा । पोखराबाट उडेर बेपत्ता भएको जहाजमा चालक दलसहित २२ जना रहेको खुलेको छ । चालक दलका तीनसहित १९ यात्रु गएको विमानस्थलले जनाएको छ । चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर होस...
१९ यात्रु लिएर उडेको थियो तारा एअरकाे वेपत्ता विमान
पोखरा । जोमसोमका लागि पोखराबाट तारा एयरको ट्वीनअटर विमान ९ बजेर ५५ मिनेटमा उडेको थियो । यहाँ १७ देखि बढीमा २० मिनेटमा जहाज पुग्छ । तर, जहाज उडेको १ घण्टासम्म पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन । विमानस्थल...
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर सम्पर्क विहीन
पोखरा । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर सम्पर्कविहीन भएको छ । करिब ३५ मिनेटदेखि उक्त विमान सम्पर्कमा नआएको पोखरा विमानस्थलले जनाएको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण पोखराका प्रमुख विक्रम गौतमका ...
रौतहटको मौलापुरको कार्यपालिका सदस्यमा आठै जना निर्विराेध
राैतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा आठै जना उम्मेदवार निर्विरोध चयन भएका छन् । आठैजना उम्मेदवार नेकपा एमालेका हुन् । नगरपालिकाको कार्यपालिका निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएक...
बजेट : कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र प्राथमिकतामा
काठमाडौं । कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि संघीय सरकारको बजेट आउने भएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर...
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएर प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ८१ डलर भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको चालू आर्थिक वर्...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रलाई संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक शासन व्यवस्था भएको बताएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएर १५ वर्षमा लागेको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखे...
rajdhanidaily.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९ ८० को बजेट आज ल्याउदैछ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आइतबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स...
कानो । दक्षिणी नाइजेरियामा शनिबार एउटा भीडभाडयुक्त चर्चको परोपकारी कार्यक्रममा खाना बाँडिरहेको बेला भागदौड मच्चिदा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । दक्षिणी रिभर्स स्टेटको पोर्ट हार्कोर्ट सहरमा भए...
काठमाडौं । शाही शासनकालका प्रभावशाली मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पहिलो संविधानसभा बैठकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको पक्षमा उभिए पनि हाल संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छन् । त्यतिबेल...
गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष : चार जना सांसद गणतन्त्रकाे विपक्षमा उभिएका थिए
काठमाडौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको आज १५ वर्ष भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा ५६० जना सभासदले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संविधानसभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षका मत...
rajdhanidaily.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
गण्डकी सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने भएपछि गठबन्धनको आपत्ति
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन लागेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले विरोध जनाएको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै विकास निर...
rajdhanidaily.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ । बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुग...
rajdhanidaily.com . २२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
लसएन्जल्स/ कोलम्बियाकी प्रख्यात गायिका साकिरा जहिल्यै आफ्ना गीतका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । उनका हरेक गीत उत्तिकै लोकप्रिय हुन्छन् । तर ,अहिले भने यी गायिका गीतले होइन कर छलीको मामलाबाट चर्चामा छिन...
काठमाडौं । निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ‘मिडिया आउटलेट’ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । जसले निर्वाचन भएकै दिन भरतपुर महानगरपालिकाकी उम्मेदवार रेणु दाहालले ४१.०८ प्रतिशत मत ल्या...
rajdhanidaily.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एक्लै जितेर प्रधानमन्त्री हुन ओलीलाई प्रचण्डकाे चुनाैती
काठमाडाैं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै जितेर प्रधानमन्त्री भएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथ...
rajdhanidaily.com . २४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
धमाधम प्रदेश सभा बैठक
काठमाडौ । स्थानिय तह निर्वाचन सकिए लगत्तै धमाधम प्रदेश सभा बैठक आब्हान र सुरुसमेत हुन थालेका छन । शुक्रवार देखी बाग्मती प्रदेश, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश सभा सुचारु भए लगत्तै प्रदेश १, मधेस प्रदेश र ...
दुष्टबाट जोगिन सभ्य अमेरिकीलाई बन्दुक
न्युयोर्क । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टेक्सास स्कूल नरसंहारपछि बन्दुक नियन्त्रणमा गरिएका आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै ‘दुष्ट’विरुद्ध आफूलाई जोगाउन सभ्य अमेरिकीहरूलाई बन्दुक दिनुपर्ने धार...
घोराही । दाङमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाको सीमाना रहेको जँगलमा सिकार खेल्न गएका लमही नगरपालिका वडा नम्बर– १ बौराह निवासी २३ वर्षीय कालुराम घर्ती मगरको...
काठमाडौं । गत २२ वैशाखमा ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ का भीमबहादुर लिम्बुले बुबा बिर्खबहादुर र आमा फिपरानी लिम्बुलाई मृत अवस्थामा भेटे । खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको अवस्थामा भीमबहादुरले बुबा...
काठमाडौं । पाँच वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने कोरोनाविरुद्धको खोप आउने भएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्र्तगत अमेरिका सरकारले ८४ लाख मात्रा खोप फाइजर अनुदानमा दिन लागेको हो । स्वास्थ्य सेव...
८ सय ३४ कैदीको सजाय मिनाहा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न अदालतको आदेशबाट कैद सजाय भोगिरहेका ८३४ जना कैदीको कैद सजाय माफ गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १० र १३ गतेको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवस, २०७९ ...
पेट्रोलियम पदार्थको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हट्यो
काठमाडौं । उपभोक्ताको चौतर्फी दबाब र विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज...
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र युनडीपीसँग मिलेर जातीय विभेदविरुद्ध घोषणा गरेका ‘लघु फिल्म प्रतियोगिता’मा ‘द बास्केट’ले पहिलो बनेको छ । चलचित्र...